Ọpụpụ nke na-adịghị mma (Aromasin) ntụ ntụ (107868-30-4) hplc ma98% | AASraw
/ ngwaahịa / Ọgwụ PCT / Ọpụpụ (Aromasin) ntụ ntụ
SKU: 107868-30-4. Category: Ọgwụ PCT
AASraw nwere ikikere na mmepụta ikike site na gram ka usoro nchịkọta nke Pemestane (Aromasin) (107868-30-4), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
Ọpụpụ (Aromasin) ntụ ntụ bụ onye na-ahụ maka Aromatase Aromatase (AI) bụ nke a na-akpọkarị AromasinIt maka nwanyị ma ọ bụ post-menopausal nwere ọnọdụ na-enweghị nkwalite ma ọ bụ ọrịa cancer nke postmenopausal mgbe ọ gwọchara ya na tamoxifen. N'ezie, aha Aromasin bụ nanị ụdị akara ọgwụ onye dị na ya n'ihi nkwado siri ike Upjohn nọgidere na-arụ ọrụ ahụ.
Ọpụpụ (Aromasin) ntụ ntụ isi agwa
aha: Ọpụpụ (Aromasin) ntụ ntụ
Ọbara arọ: 296.4
agba: ọcha na-acha ọcha
Umu ogwu uzo
6-methylenandrosta-1,4-diene-3,17-dione 6-METHYLENEANDROSTA-1,4-DIENE-3,17-DIONE 10,13-dimethyl-6-methylidene-7,8,9,10,11,12,13,14,15,16-decahydrocyclopenta [a] phenanthrene - ntụpọ ihe dị ka FCE-24304 nke ntụ ntụ (CAS 107868-30 -4) Ụdị ihe atụ
Umu uzo uzo
Umu uzo bu ihe ozo.
N'ahịa, enwerekarị nkọwa 2, Mbadamba: 25mg na Capsule: 25mg. Na ya ga-agba ọsọ na 25mg n'otu oge, otu ugboro n'ụbọchị.
Akwụsị ntụ ntụ
ihe kachasị emetụta ụbụrụ na-emepụta:
Nausea na / ma ọ bụ Vomiting (obere)
Ihe omumu emeela ka egosiputa na uzuzu di ndu puru inwe ike ibelata onu ogugu nke ozo, nke nke a nwere ike ime ka mmadu nwee nsogbu osteoporosis. Nke a ekwesịghị ịbụ nnukwu nchegbu maka ọtụtụ ndị ọrụ steroid dị ka ọtụtụ ndị na-agwọ ọrịa nwere ike ịba ụba nke ịnweta ọkpụkpụ.
Mmetụta ikpeazụ nke uzuzu Exemestane ga-agagharị na cholesterol. Nkpọrọgwụ ntụ ọka, dị ka ihe niile nwere ike ime ka cholesterol dị elu. Cholesterol, nke ahụ bụ ihe gbasara nchegbu, maka onye okenye tozuru etozu iji nọgide na-enwe ọkwa cholesterol kwesịrị ekwesị na iji steroid agwọ ọrịa, ọ ga-ewe mgbalị ma kwesiri anya gị.
Oko uzo nwere ike iji kpalite mmepụta nke testosterone, nke bu ihe mere ndi mmadu ga-eji tinye ya n'oge PCT ha. Dịka ntụ ọka na ntụpọ na Letrozole, ntụ ọka dị na ya ga-eme ka ndị na-ahụ maka ọgwụ na-eme ka ndị ọzọ na-egbuke egbuke (LH) na Follicle Stimulating Hormone (FSH), hormones abụọ dị mkpa maka mmepụta nke testosterone. Ọ bụ ezie na ndị ọzọ na-ahụkarị AI na-ekere òkè a, E gosipụtara raw ntụ ntụ dị oke na-ebute mmetụta androgenic ntakịrị, yana ikike ịbawanye mmepụta nke Insulin-Like Growth Factor-1 (IGF-1). Nke a bụ àgwà ọ bụla ọzọ AI nwere ike ikwu na ibu. Site n'iji ntụ ntụ dị na PCT, onye ọ bụla na-enweta nkwalite ụbụrụ dị mkpa maka mgbake, mana na IGF-1 na-amụba na-emekwa ka ọnọdụ ikuku na-arịwanye elu. Nke a weere na ọ bara uru site n'aka ndị ọrụ steroid dị ka ọ nwere ike inye ha ikike ichebe anụ ahụ ha na-agbanyekwu oge mgbe ha na-eji ya eme ihe.
Ụdị ntụ ntụ ntụ ntụ
Otu esi esi zụta Ezigbo uzuzu: ntụ ntụ dị (CAS 107868-30-4) sitere na AASraw
AASraw na-enye 99% nke dị ọcha / Ụdị raw ntụ ntụ maka ndị na-ahụ maka ụlọ ma ọ bụ n'okpuruala larịị maka iji ọnụ ekwu okwu.
Akwụsị ntụ ọka (CAS 107868-30-4) Ezi ntụziaka